Kulesi sifundo sesiNgisi, sizobona izinombolo ngesiNgisi. Okokuqala, sizobhala izinombolo zesiNgisi kuze kufike ku-10, okungukuthi, izinombolo zesiNgisi, bese kuba izinombolo zesiNgisi kuze kufike ku-100, bese sibhala imisho eyisibonelo ngezinombolo zesiNgisi. Izinombolo zesiNgisi elitecasino Sizofunda ngesipelingi nokubizwa kwabo.
Kulesi sihloko ngezinombolo zesiNgisi, sizokhuluma ngezihloko ezilandelayo:
Izinombolo ezifika ku-100 ngesiNgisi
Isipelingi nokuphinyiswa kwezinombolo ngesiNgisi
Izindlela zokubamba ngekhanda izinombolo ngesiNgisi
Ungazibiza kanjani izinombolo zamadesimali ngesiNgisi
Ungazibiza kanjani izinombolo ezihlukanisiwe in English
Ungabiza kanjani amaphesenti ngesiNgisi?
Ufunda kanjani izinsuku neminyaka ngesiNgisi
Ungazibhala Kanjani Izinombolo ngesiNgisi
Izinombolo zesiNgisi; Njengezinombolo zaseTurkey, idalwe ngokuya ngokuhlelekile okuthile. Kodwa-ke, uma uqonda umqondo womsebenzi, uzofunda isipelingi nokubizwa kwezinombolo ngokushesha okukhulu. Kulesi simo, okokuqala, kufanele ufunde ukupela nokubizwa kwazo zonke izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-100. Kodwa-ke, kufanele ubeke phambili ukulingana zonke izinombolo kusuka ku-1 kuye ku-10. Singasho ukuthi ukufunda ezinye izinombolo kusuka ku-10 kuye ku-100 kuzoba lula kakhulu.
Okwamanje, ake sengeze inothi elincane: Uma ufuna ukufunda zonke izinombolo zesiJalimane ukusuka kuqanda kuye ezigidini ngakho kokubili isipelingi sazo nokuphimisela, sicela ubheke isifundo sethu: Izinombolo zesiJalimane
Manje siqhubeka nesihloko sethu sezinombolo zesiNgisi. Okokuqala, ake sikunikeze okubonwayo, bese sibhala izinombolo ngesiNgisi ngayinye ngayinye.
Ngezansi izinombolo zesiNgisi ezisuka kwelilodwa ziye kwikhulu.
1 - eyodwa (iveni)
2 - amabili (tu)
3 - amathathu (tıri)
4 - ezine (okwenzelwe)
5 - emihlanu (iphutha)
6 - ayisithupha (ama-cyc)
7 - uthando (uthando)
8 - ayisishiyagalombili (eyt)
9 - ugogo (nayn)
10 - ishumi (isikhumba)
12 - nambili
13 - ishumi nantathu (umkhosi)
14 - nane (amashumi amane)
15 - nanhlanu (amashumi amahlanu)
16 - ishumi nesithupha (sikstiin)
17 - ishumi nesikhombisa (thokoza)
18 - ishumi nesishiyagalombili (ishumi nesishiyagalombili)
19 - ishumi nesishiyagalolunye (nayntiin)
20 - amabili (ishubhu)
21 - amashumi amabili nanye
22 - amashumi amabili nambili (tuventi tu)
23 - amashumi amabili nantathu (tuventiy tırii)
24 - amashumi amabili nane (ngeyeshumi nambili)
25 - amashumi amabili nanhlanu (tuventiy fayf)
26 - amashumi amabili nesithupha (tuventiy siks)
27 - amabili nesikhombisa (thanda abangamashumi ayisikhombisa)
28 - amashumi amabili nesishiyagalombili (i-tuventiy eyt)
29 - amashumi amabili nesishiyagalolunye (tuventiy nayn)
30 - amathathu (amashumi amathathu)
31 - amathathu nanye (törtiy van)
32 - amathathu nambili (törtiy tu)
33 - amashumi amathathu nantathu (törtiy tıri)
34 - amashumi amathathu nane (for törtiy)
35 - amathathu amathathu nanhlanu (törtiy fayf)
36 - amashumi amathathu nesithupha (törtiy siks)
37 - amathathu-thando (love törtiy)
38 - Amashumi amathathu nesishiyagalombili
39 - Amashumi amathathu nesishiyagalolunye (iTörtiy Nayn)
40 - amane (fortiy)
41 - amashumi amane nanye (fortiy van)
42 - amane nambili (fortiy tu)
43 - amashumi amane nantathu (uhlobo lwenhlanhla)
44 - amashumi amane nane (amashumi amane)
45 - amashumi amane nanhlanu (fortiy fayf)
46 - Amashumi amane nesithupha (fortiy siks)
47 - Amashumi amane nesikhombisa (love fortiy)
48 - Amashumi amane nesishiyagalombili (i-fortiy eyt)
49 - Amashumi amane nesishiyagalolunye (fortiy nayn)
50 - amashumi amahlanu (amashumi amahlanu)
51 - amashumi amahlanu nanye (van van van)
52 - amashumi amahlanu nambili (amashumi amahlanu tu)
53 - amashumi amahlanu nantathu
54 - amashumi amahlanu nane (amashumi amahlanu
55 - amashumi amahlanu nanhlanu (ama-fayf amahlanu)
56 - amashumi amahlanu nesithupha (ama-sikki amahlanu)
57 - ukuthanda amashumi amahlanu (thanda amashumi amahlanu)
58 - amashumi amahlanu nesishiyagalombili
59 - amashumi amahlanu nesishiyagalolunye (ayisihlanu nayn)
60 - ayisithupha (siksti)
61 - amashumi ayisithupha nanye (i-fuck van)
62 - ayisithupha nambili (siksti tu)
63 - amashumi ayisithupha nantathu
64 - amashumi ayisithupha nane (nge-siksti)
65 - amashumi ayisithupha nanhlanu (siksti fayf)
66 - amashumi ayisithupha nesithupha (siksti siks)
67 - uthando olunamashumi ayisithupha (love fuck)
68 - amashumi ayisithupha nesishiyagalombili
69 - ayisithupha nesishiyagalolunye (siksti nayn)
70 - ayisikhombisa (thokoza)
71 - ayisikhombisa nanye (iveni ayisikhombisa)
72 - ayisikhombisa nambili (amashumi ayisikhombisa tu)
73 - amashumi ayisikhombisa nantathu
74 - amashumi ayisikhombisa nane (amashumi ayisikhombisa nane)
75 - amashumi ayisikhombisa nanhlanu (sevinti fayf)
76 - amashumi ayisikhombisa nesithupha
77 - ukuthanda amashumi ayisikhombisa (thokoza uthando)
78 - ayisikhombisa nesishiyagalombili (ayisikhombisa iso)
79 - ayisikhombisa nesishiyagalolunye (ayisikhombisa nayn)
80 - ayisishiyagalombili (eyti)
81 - ayisishiyagalombili nanye (eyti van)
82 - ayisishiyagalombili nambili (eyti tu)
83 - ayisishiyagalombili nantathu
84 - ayisishiyagalombili nane (i-eyti ye)
85 - amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu (eyti fayf)
86 - amashumi ayisishiyagalombili nesithupha (eyti siks)
87 - ukuthanda amashumi ayisishiyagalombili (uthando eyti)
88 - ayisishiyagalombili nesishiyagalombili (eyti eyt)
89 - ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye (eyti nayn)
90 - Amashumi ayisishiyagalolunye (naynti)
91 - Amashumi ayisishiyagalolunye nanye (uNaynti Van)
92 - ayisishiyagalolunye nambili (naynti tu)
93 - amashumi ayisishiyagalolunye nantathu
94 - ayisishiyagalolunye nane (naynti ye)
95 - Amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu (naynti fayf)
96 - amashumi ayisishiyagalolunye nesithupha (naynti siks)
97 - Amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa (love naynti)
98 - Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili
99 - Amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye (uNaynti Nayn)
100 - ikhulu (van handird)
Lapho usuzazi zonke izinombolo kusuka ku-0 kuye ku-10, ungaqhubeka ufunde ezinye izinombolo kusuka ku-11 kuye ku-100. Kodwa-ke, njengoba sishilo, okuza kuqala kwakho kufanele kube izinombolo eziyi-1-10! Okwamanje, u-zero (0) ubhalwe njenge-zero ngesiNgisi bese ufundwa njenge-zirou.
isiZulu; Imfundo ngalolu limi iba yigugu njengoba ibonakala kuzo zonke izingxenye zempilo. Ngomsebenzi womuntu ngamunye, umkhakha wokuqeqesha kanye nezintshisekelo ezikhethekile isiZulu kumele athuthukise ulwazi lwakhe! Ngalesi sikhathi, labo abaqala imfundo yesiNgisi bangabokuqala uku Igama lesiNgisi badinga ukuthuthukisa ulwazimagama lwabo. Futhi, kuvamile Inkulumo yesiNgisi Amaphethini wokufunda nawo kufanele abhekiswe. Ngaphezu kwalokho, njengakwezinye izilimi zomhlaba, kunezifundo ezithile okufanele wonke umuntu azifunde ngesiNgisi. Izinombolo ziza kuqala!
Funda isi-english Noma ngabe iyiphi inhloso yakho, kufanele nakanjani ufunde ukufana kwesiNgisi kwezinombolo nezinombolo. Ngaphandle kwalokho, ngeke ukwazi ukudlulela esigabeni esilandelayo semfundo yesiNgisi. Izinombolo; Siqukethe amagama okufanele nakanjani asetshenziswe kuwo wonke amaphuzu wokuphila kwansuku zonke. Izinombolo zesiNgisi futhi isipelingi nokubiza kwabo kufanele nakanjani kufundwe.
Izinombolo zesiNgisi zidinga ukufundwa ngokohlelo oluthile. Njengezinye izilimi, isiNgisi sakhiwe ngemigomo ethile. isiZulu; akulona ulimi okufanele lufundwe ngendlela engajwayelekile noma engenacala. Kodwa-ke, ngemuva kokuqonda imigomo eyisisekelo yokukhuluma nokubhala ngesiNgisi, kuzoba lula kakhulu ukufunda okusele kukho. Izinombolo zokufunda ngesiNgisi Ilingana kahle le ncazelo.
Yini Okufanele Uyinake Lapho Ufunda Izinombolo ngesiNgisi?
Izinombolo zesiNgisi; Njengoba sishilo phambilini, inesigqi ngaphakathi. Ngamanye amagama, ilawulwa ngokuya ngokuhleleka okuthile. Kungakho ungafunda izinombolo ngesiNgisi kalula. Ukufunda izinombolo Kungazwakala kunzima. Ngalesi sikhathi, kufanele uqale ngokufunda izinombolo 1 kuye ku-10. Ukufunda lezi zinombolo ngeke kube nzima kakhulu kuwe. Ngoba kufanele siveze ukuthi yizinombolo ozijwayele esikoleni, ku-TV nakwezinye izindawo eziningi.
Izinombolo zesiNgisi zinemikhondo ethile. Zonke izinombolo kusuka ku-12 kuye ku-19 kuzoba lula ukuzifunda ngokungeza –ishumi nambili ekugcineni. Ngalesi sikhathi, singasho ukuthi umsebenzi wakho uzoba lula lapho ufunda izinombolo ebangeni esishilo. Izinombolo ngaphandle kuka-11 no-12 zihlelwe ngokuhambisana nomthetho esiwubalulile. Kungaba okulungile ukufunda izinombolo ezingama-20, 30, no-40 ngeziphindaphindwe ngo-10.
Izinombolo zokufunda eziphakathi kuka-20-30 noma u-30-40 zizoba lula kakhulu ngoba uzosebenzisa inombolo engu-9 oyifunde ngaphambili. Ukufunda izinombolo ngemuva kwe-100 kwenziwa ngaphakathi komqondo ofanayo. Okokuqala, kufanele usho ukuthi inombolo iqukethe ubuso obungaki. IkhuluNgemuva kokwenza izinqumo ezinjengamakhulu amabili, amakhulu ayisishiyagalombili, enye inombolo ngu-1 kuye ku-100. Izinombolo zesiNgisi Kufanele uhambisane nengxenye.
Izinombolo zokufunda ngesiNgisi Kubaluleke kakhulu! Lapho usebenzisa ulimi oluvamile lwansuku zonke, uma kukhulunywa ngezindaba zesikhungo noma ezihlelekile Izinombolo zesiNgisi uhlangabezana nayo. Ngaphezu kwalokhu, esikoleni, emsebenzini, ekhaya, lapho u-oda ukudla, ukubhala uhlu lwezikhalazo, ukuchaza ikheli nezinye izindawo eziningi. Inombolo yesiNgisi Uzodinga imininingwane.
Uma ungazazi izinombolo ezifanayo zesiNgisi noma uzazi ngokuphelele, uzohlangabezana nezinkinga eziningi. Eqinisweni, imisebenzi yakho eminingi izokhanselwa ngenxa yalesi sizathu. Kulo mongo, kufanele ufunde izinombolo zesiNgisi kanye nesipelingi nokubizwa kwazo. Ngisho, Ukufunda ulimi lwesiNgisi kufanele uqale ngezinombolo kuqala.
Ukuzivocavoca ngezinombolo ngesiNgisi
Kunabantu abangamashumi amathathu nanye e-sitting room. (Kunabantu abangama-31 egumbini lokuphumula.)
ULionel Messi uwine iBallon D'Or yakhe yesithupha ngo-2019. (ULionel Messi uzuze umklomelo wesithupha weBallon D'Or ngonyaka we-2019.)
Abantu abangamakhulu ayisithupha basala dengwane ngemuva kokudilika komhlaba. (Abantu abangama-600 basala dengwane ngemuva kokudilika komhlaba.)
Ngicele izikhathi ezingamashumi amabili ukuthi ngithule. (Ngikucelile ukuthi uthule izikhathi ezingama-20.)
Waya eFrance okwesithathu ngo-2020. (Waya eFrance okwesithathu ngo-2020.)
Ungazifunda kanjani izinombolo zamadesimali ngesiNgisi?
Kufundwa amadesimali ngesiNgisi Kwenzeka ngendlela ehlukile uma kuqhathaniswa neTurkey. Iphuzu ledesimali Ngenkathi ifundwa njengephuzu, okunye kufundwa njengezinombolo ngamunye ngamunye.
5: iphuzu lesihlanu
30: iphuzu lesithathu
75: khomba ayisikhombisa amahlanu
06: khomba zero six
95: amaphuzu amabili ayisishiyagalolunye nanhlanu
Ungazifunda Kanjani Izinombolo Ezihlukanisiwe ngesiNgisi?
Kufundwa izinombolo eziyingxenye ngesiNgisi Kukhona ukufana phakathi kwamadesimali wokufunda nezinombolo. I-numerator yezinombolo ezingama-fractional ifundwa kusetshenziswa izinombolo zokubala, futhi i-denominator ifundwa kusetshenziswa izinombolo ezi-ordinal. Ngaphezu kwalokho, lapho i-numerator inkulu kuneyodwa, inani lama-oda ku-denominator lifundwa ngobuningi. Umthetho esikhuluma ngawo usebenza kuzo zonke izinombolo ngaphandle kwenombolo 2. Lapho inombolo eku-denominator ingu-2, kusebenza umthetho ohlukile. Ezimweni ezinjalo, uma isibalo singu-1 njengohafu, uma isibalo singaphezu kuka-1 ama-halves funda njenge.
1/3: ingxenye eyodwa kwezintathu
3/5: amahlanu amathathu
5/8: isishiyagalombili lesishiyagalombili
Half: isigamu esisodwa
3 / 2: amahafu amathathu
Ufunda kanjani amaphesenti esiNgisini?
Amaphesenti wokufunda ngesiNgisi Kulula ngokwedlulele. Ngaphezu kwalokho, kufanele sisho ukuthi ukufunda amaphesenti kubaluleke kakhulu. Isetshenziswa ikakhulukazi empilweni yansuku zonke nasempilweni yebhizinisi.
6%: Amaphesenti ayisithupha
30%: Amaphesenti angamashumi amathathu
36,25%: Amashumi amathathu nesithupha amaphuzu amabili amahlanu
%ikhulu: Amaphesenti ayikhulu
500%: Amaphesenti angamakhulu amahlanu
Ungazifunda Kanjani Izinhlamvu zemali ngesiNgisi?
Kulandelwa indlela ehlukile ekufundeni inani lemali ngesiNgisi. Lapho ufunda inani lemali, okokuqala kufundwa inombolo ephelele. Ngemuva kwalokho imali yengezwa ekugcineni. Endabeni yezinombolo zamadesimali, kuhlangatshezwana nazo ukufunda izingxenye ngaphambi nangemva kwephoyinti ngokwehlukana. Futhi, uma kukhona igama lohlamvu lwemali olufundwayo, leli gama kufanele lengezwe ekugcineni. Kodwa-ke, okungenhla kushiwo amadisimali wokufunda kwehlukile. Yingakho kufanele sisho ukuthi le mithetho isebenza kuphela kwizimali. Sizochaza ngezibonelo ukuqonda kangcono isihloko!
$ 30: Amashumi amathathu amadola
I-55 Euro: Amashumi amahlanu ama-euro
Ama-150 £: Amakhilogremu ayikhulu namashumi ayisihlanu
I-12,66 Euro: Ama-euro ayishumi nambili ngamashumi ayisithupha nesithupha
$ 45,35: Amashumi amane amadola amahlanu namasenti angamashumi amathathu nanhlanu
Ngenxa yalokho, kufanele usebenze ngokujulile ekufundeni inani lemali.
Uzifunda Kanjani Izinyathelo ngesiNgisi?
Amayunithi wesilinganiso esiNgisi Isifinyeziwe njengaseTurkey. Ngaphandle kwalokho, kufanele sisho ukuthi abukho ubunzima ekufundeni izilinganiso. Kungenzeka uyifunde njengoba ifundwa ngesiTurkey.
50m: Amamitha angamashumi amahlanu
30 km / h: Amakhilomitha angamashumi amathathu ngehora
12ft: Izinyawo eziyishumi nambili
2tsp: isipuni ezimbili
Uyifunda Kanjani Iminyaka NgesiNgisi?
NjengaseTurkey, ukufundwa kweminyaka ngesiNgisi kunzima kakhulu kunokufunda izinombolo ezijwayelekile. Eminyakeni equkethe inombolo enamadijithi amane, ikakhulukazi izinombolo ezimbili zokuqala zifundwa njengenombolo ephelele. Ngemuva kwalokho kufanele sisho ukuthi amadijithi amabili alandelayo afundwa njengamanani aphelele. Kodwa-ke, eminyakeni ethile lesi simo asinakusetshenziswa.
Ikakhulukazi iminyaka eyikhulu yokuqala yeminyaka eyinkulungwane entsha kufanele ifundwe njengenombolo ephelele, noma ngabe ingamadijithi amane. Ngaphezu kwalokho, kujwayelekile nokuwafunda njengamanani ezinombolo ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, iMillennia, kufanele ifundwe ngamanani noma nini nanoma kuphi. Amakhulu eminyaka amasha afundwa njengama-integer, njengoba ungacabanga. Ngaphezu kwalokho igama elithi izinkulungwane alisetshenzisiwe. Ikakhulukazi lapho kufundwa iminyaka eyinkulungwane edlule, ukusetshenziswa kwegama elithi izinkulungwane akubuzwa.
Indlela ehlukile okuhlangatshezwana nayo ekufundeni iminyaka enamadijithi amathathu. Kuvamile ukuthi kufundwe njengezinombolo ezinamadijithi amathathu, futhi kufundwa njengenombolo enezinombolo ezilandelwa yizinombolo ezimbili. Iminyaka enamadijithi amabili ifundwa njengamanani aphelele njengezibonelo zangaphambilini. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa inkulumo ethi "unyaka" ngenkathi ufunda noma yimuphi unyaka ukugwema noma ikuphi ukudideka. Ngale ndlela, incazelo yonyaka ingenziwa icace kakhudlwana. Kodwa-ke, ukugcizelelwa esikukhulumile kwenziwa kuphela lapho kufundwa iminyaka emibili noma emithathu enamadijithi.
Ngaphezu kwalokho, iminyaka ngaphambi konyaka "0" yile BC Kufundwa ngokungeza. I-BC ibizwa "bisi". Singachaza ukuthi singayifunda kanjani iminyaka ngezibonelo!
2013: Amashumi amabili nantathu noma izinkulungwane ezimbili nantathu
2006: Izinkulungwane ezimbili nesithupha
2000: Izinkulungwane ezimbili
2020: Izinkulungwane ezimbili namashumi amabili
1500: Amakhulu ayishumi nanhlanu
1850: Ishumi nesishiyagalombili namashumi amahlanu
26: Amashumi amabili nesithupha
3000 BC: Izinkulungwane ezintathu BC
Ekugcineni, kufanele sikhulume ngokuthi sifunda kanjani uziro. Ukusetshenziswa kweZero kutholakala kuzo zombili iziNgisi zaseBrithani nezaseMelika. Nil isisho esisetshenziswe kakhulu emiphumeleni yemincintiswano yezemidlalo. Akunalutho isisho esingasetshenziswanga e-USA.
Uma kukhulunywa ngolimi lwendawo yonke, cabanga kuqala isiZulu imali engenayo. Lesi simo asihambelani neze. Empeleni, siyizwile imishwana yokuthi ulimi oluvamile lomhlaba luyisiNgisi kaninginingi. Ngalesi sikhathi, singasho kalula ukuthi isiNgisi yilona limi olugqamile emhlabeni. Kodwa-ke, wonke umuntu uyazibuza ukuthi isiNgisi sesithandwa kanjani kangaka.
IsiNgisi sisakazeka kabanzi; Imayelana nenqubo eyenzeka ngemuva kweNguquko Yezimboni. Ngenxa yokuhwebelana kwamazwe omhlaba, isiNgisi sesiqale ukuzitholela indawo. Ulimi lomhlaba jikelele; akulona ulimi olukhulunywa kakhulu emhlabeni. IsiShayina; mhlawumbe ulimi olukhulunywa ngabantu abaningi. Kodwa-ke, impela yehlulekile ukuba ulimi olubaluleke njengesiNgisi.
Singasho ukuthi ulimi selube umhlaba wonke ngenxa yezizathu zomnotho nezepolitiki. Ukulandela intuthuko eyenzeka ngemuva kweNguquko Yezimboni Ukufunda isiNgisi sekuyimpoqo. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi isiNgisi sesikhulunywa kwabezindaba iminyaka engaphezu kwengu-400 kungenye into eyenza ukuthi ibaluleke. Ukusungulwa kwe-ejensi yokuqala yezindaba yamazwe omhlaba eLondon yintuthuko eqinisekisa lolu lwazi.
Kwenzeka Kanjani ukuthi IsiNgisi Sibe Ulimi Lomhlaba Wonke?
isiZulu; Yize kuwulimi olubuse umhlaba isikhathi eside kulezi zinsuku ngama-2020, aluzange luthole lesi sici ngokushesha. Ngemuva kokuthuthuka okungokomlando, singasho ukuthi isiNgisi wulimi olusebuse umhlaba wonke. isiZulu; Njengoba kuwulimi olusemthethweni lwamazwe anamandla kwezomnotho, kwezobuciko nakwezesayensi, kube lula ukusabalala emhlabeni wonke. Kodwa-ke, sisengasho ukuthi kunezinto ezithile ezenza ukuthi isiNgisi sigqame ekuxhumaneni komhlaba wonke.
Ukukhula kombuso waseBrithani
Ukungena kwe-United States njengombuso obusayo ngemuva kokuphela kwamandla ombuso waseBrithani
Ukuvela nokusabalala kohlelo lokubhanga
Ukunwetshwa kobudlelwano phakathi kwamazwe kanye nesidingo solimi olufanayo ngalesi sizathu
Ukuqhamuka nokwanda kokusakazwa kwethelevishini nomsakazo, ikakhulukazi i-cinema
Inqubekela phambili ebonakalayo ocwaningweni lwesayensi nasezifundweni zezifundo
Yize i-inthanethi ingakatholakali emakethe, kodwa inyusa amathuba okuthi abantu bathole ulwazi.
Ngenxa yalokhu, singasho ukuthi intuthuko engenhla iyinto ebalulekile ekutheni ulimi lwesiNgisi lube namuhla.
Kuyini Ukubaluleka KwesiNgisi Esikhathini Sethu?
Isikhathi sedijithali, esasungulwa ngeminyaka yama-1990; Ngama-2000s nangemva kwalokho, ngama-2010, yaqala inqubo yentuthuko enkulu futhi yaba namuhla. Ukunyamalala kwemingcele; idonsela ukunakwa njengokuthuthuka okubaluleke kakhulu kwenkathi yedijithali. Ngamanye amagama, umuntu ohlala eTurkey; Ingakwazi ukuxhumana nabantu abahlala kolunye uhlangothi lomhlaba nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle komehluko wesikhathi nendawo. Ngalesi sikhathi, singasho ukuthi abantu bezindawo ezahlukahlukene badinga ulimi olufanayo. isiZulu; Ikwazile ukuba ulimi oluvamile lwabantu nezikhungo isikhathi eside kakhulu.
Ukuze uzuze kuzikhungo ezinikezwa ngumhlaba obonakalayo kithi isiZulu ukuhumusha kuyadingeka kakhulu kunakuqala. Kokubili amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zeselula; Isebenzisa isiNgisi njengolimi oluvamile. Ngaphezu kwalokho, i-e-commerce, ethatha indawo yezentengiselwano yendabuko, ibuye isebenzise isiNgisi. Ngamanye amagama, kubalulekile ukuthi usazi isiNgisi ukuze ufunde, uqonde futhi uzuze kukho konke okubonayo emhlabeni obonakalayo!
Kungani izindaba zesiNgisi Lapho uphendula umbuzo, kuyadingeka ukuthi kukhulunywe ngezinto ezingokoqobo ukuze abantu baziqonde. Ulwazi lwesiNgisi lubalulekile ukulandela intuthuko yesayensi nezobuchwepheshe. Isibonelo, yonke imininingwane eyabiwe mayelana ne-coronavirus, izifundo zokugoma nezinye izingqinamba eziningi; imvamisa kufaka izinsizakusebenza zakwamanye amazwe.
Ngaphezu kwalokho, singasho ukuthi abantu noma yikuphi emhlabeni bangakhuluma nomhlaba wonke noma nini lapho befuna. Ngenxa yamavidiyo esiNgisi alayishwe ku-YouTube, inani labantu abahlangabezana namathuba emisebenzi ahlukene nakwezemfundo aliwona neze! Kukhona nabantu abakhuluma nezinkulungwane zabalandeli ngokusakaza bukhoma kwi-inthanethi! Amavidiyo nokuthunyelwe; Isakazeka ngejubane lokukhanya, ngomqondo ongokomfanekiso, kwi-intanethi. Kodwa-ke, noma ngubani ofuna ukuzwakala emhlabeni isiZulu kumele wenze!
Singachaza ngesibonelo esihle ukuthi ukwazi isiNgisi kungayiqeda kanjani imingcele. UGreta Thunberg waseSweden, manje oneminyaka engu-18; Ngo-Agasti 2018, waqala imibhikisho lapho athatha khona izinyathelo zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Ukudonsela ukunaka ngesiteleka sesikole sesimo sezulu, iThunberg; Ubelokhu eyisishoshovu sesimo sezulu kusukela lapho. Into ebaluleke kakhulu ehlukanisa iThunberg nezinye izishoshovu ngokungangabazeki isitayela sakhe esihle. Ngamanye amagama, uThunberg uchaza lokho afuna ukukusho ngemisho nangephimbo elifanele kakhulu; futhi kwenza isithombe esiqinile ngesiNgisi sayo esihle. EThunberg; isiZulu Ukube wayekade eyeve eshumini nambili, cishe wayengeke enze izwi lakhe lizwakale naphezu kwecala lakhe elilungile!
Ukusetshenziswa kokuhunyushwa kwesiNgisi futhi ibanzi ngokwedlulele! Kufanele sithi ukuhunyushwa kwesiNgisi kuyasetshenziswa kwezokwelapha, ezobuchwepheshe nakweminye imikhakha eminingi, ikakhulukazi ubudlelwane bamazwe omhlaba. Ngaphezu kwalokho, ikakhulukazi emhlabeni wedijithali Izinguqulo zesiNgisi Isetshenziselwa imisebenzi ekhiqiza ngokweqile. Ikakhulu, kuyadingeka ukuthi kushiwo ithonya lesiNgisi ekumaketheni kwedijithali. Ukuba khona kwamathuba edijithali kubaluleke kakhulu ukuthi imikhiqizo emikhulu ikhule futhi ibe yimbulunga yonke! Ngakho-ke, isidingo sokuhunyushwa kwesiNgisi kwayo yonke inkampani siyanda. Ngaphezu kwalokho, Ukuhunyushwa kwesiNgisi Kukhona nokuthuthuka ezinsizakalweni zayo.
Ngenxa yokwanda kwesidingo sokuhumusha, kwenziwa nezinto ezintsha emisebenzini yokuhumusha. Ukuba khona kwezinsizakalo zokuhumusha kokudala kwenza ukuthi ukuhunyushwa kwesiNgisi kwabelwane ngakho emhlabeni wonke. Ngenxa yalokhu, singasho ukuthi ukuhunyushwa kwesiNgisi kulungile phakathi kwezwe lokuxhumana kwidijithali. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi yobuciko ilandelwa eduze sibonga ukuhunyushwa kwesiNgisi. Ngamanye amazwi, Ukuhunyushwa kwesiNgisi; Ngokuzivumelanisa namathuba obuchwepheshe asathuthuka ngokushesha okukhulu, izitholela indawo kuyo yonke imikhakha.
Ngazo zonke lezi zizathu, singasho ukuthi isiNgisi sibaluleke kakhulu eminyakeni yethu. Ezikoleni, ezindaweni zokusebenza nanoma ikuphi ongakucabanga Funda isi-english Kwaphela ukuba yisidingo futhi kwaphoqeleka.
# Ungazibhala Kanjani Izinombolo ngesiNgisi
# Izinombolo zesiNgisi
# Yini Okufanele Uyinake Lapho Ufunda Izinombolo ngesiNgisi?
# Ukuzivocavoca ngezinombolo ngesiNgisi
# Ungazifunda kanjani izinombolo zamadesimali ngesiNgisi?
# Ungazifunda Kanjani Izinombolo Ezihlukanisiwe ngesiNgisi?
# Ufunda kanjani amaphesenti esiNgisini?
# Ungazifunda Kanjani Izinhlamvu zemali ngesiNgisi?
# Uzifunda Kanjani Izinyathelo ngesiNgisi?
# Uyifunda Kanjani Iminyaka NgesiNgisi?
# Kwenzeka Kanjani ukuthi IsiNgisi Sibe Ulimi Lomhlaba Wonke?
# Kuyini Ukubaluleka KwesiNgisi Esikhathini Sethu?
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni ezi-3 ezedlule, ngo-Agasti 26, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Okthoba 29, 2021.
Ukubingelela kanye Nemisho Yokuvalelisa ngesiNgisi
Tags: izinombolo zesiNgisi kufika ku-100, izinombolo zesiNgisi kufika ku-20, indlela yokubiza izinombolo ngesiNgisi, ubhala kanjani izinombolo ngesiNgisi, isingisi izinombolo